Global Voices teny Malagasy » Fiainan’i Tião, Mpivarotra Hot-Dog Eny An-Dalamben’i São Paulo · Global Voices teny Malagasy » Print
Fiainan'i Tião, Mpivarotra Hot-Dog Eny An-Dalamben'i São Paulo
Voadika ny 10 Jona 2016 4:40 GMT 1	 · Mpanoratra Agência Mural Nandika (fr) i Henri Dumoulin, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Sakafo, Vaovao Tsara
Tião sy ny hot-dog, tompon'andraikitry ny filaharambe ao afovoan'i Osasco . Sary nahazoana alalana.
Ity lahatsoratr'i Paulo Talarico ity dia navoaka voalohany tao amin'ny bilaogin'i Agência Mural . Navoaka eto indray izany noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
“Tongasoa eto amin'ny restolanche”. Alarobia hatramin'ny Asabotsy, amin'ny alina ao amin'ny kianja Padroeira do Brasil, ao afovoan'i Osasco, tanàna midadasik'i São Paulo dia ahitana filaharambe eo anoloan'ny sarety kely izay mikarakara tsara sy haingana ny “lanche (mitovy amin'ny hamburger)” mampiavaka an'i São Paulo.
“Baguete (karazana mofo dipaina)” sa “bagnat (karazana mofo)” ? Hoy ny fanontaniana mahazatra an'i Sebastião Figueira, 68 taona mikasika ny karazana mofo asiana ny hot-dog (cachorro quente amin'ny teny Breziliana = ara-bakiteny hoe “alika mafana”). Ny mety ho valintenin'ny mpanjifa: “Iray feno, tsy asiana voatabia”. Mikarakara iray amin'izany izy raha mitodika any amin'ny mpanjifan'ny ‘Dogão do Tião’ manaraka sahady ny mpanampy azy.
Izany no andavan'androm-piainan'ity lehilahy ity nandritra ny 22 taona nahitany ity anton'asa ity. “Saofera kamiao aho taloha, tsy an'asa aho avy eo ary mba tsy hijanonana hatory fotsiny ao an-trano, nanomboka nivarotra hot-dog aho. Amin'ny taonako, fantatrareo tsara fa tsy hisy handray ahy hiasa intsony”.
Eo am-pihinanana, mankafy ny hamiramiran'ny mpivarotra ny mpanjifa. Sary nahazoana alalana.
Tsy fantany izay isan'ny sakafo amboariny isaky ny alina, saingy manomboka tsara alohan'ny ahatongavany ny asa fanomanana. Ankoatra ny sakafo nopotsehina sy ny frity, tsy adinoina ihany koa ny lakiremy ampemba sy ny saosy”.
Matetika ny tena ataony, dia ny sandwich nosesefana zavatra betsaka, izay tinady mahazatra ao amin'ity toerana sy lalana Maria Campos ity, safidy azo atao ho an'izay mirava harivariva amin'ny asa na koa te-hitsangatsangana fotsiny.
Noho ny antony maro samihafa no mahatonga ny filaharambe hita eo anoloan'ity sarety kely ity kanefa afaka mividy izany ihany koa eo akaiky eo ihany. Ho an'i Tião, tantaran'ny kalitao izany, noho izy mikarakara hena sy vokatra safidy tsara indrindra (voalohany ihany). Indraindray ohatra izy mikarakara sakafo nopotsehina 100 hatramin'ny 150 kg. Ny tombontsoa hafa dia ny toe-po miramiran'ny tompon'ny kalesy kely fivarotana: “Roapolo indraindray ireo olona miara-tonga hanafatra hot-dog am-pitsikitsikiana fatratra” hoy ny mpanjifa iray.
“Fomba fiasako izany” hoy izy,” mandritra ny androm-piainako, voatery manatelina sandwichs “mibotsina”, sy fingotra aho, ankehitriny, te hanao tsara kokoa aho”. Navoaka taminay nandritra ny antsafa ireo tohan-kevitra ampiasainy mba hahazoana mpanjifa: “Ny hot-dog tokana tsy mampatavy, raha tsy hoe manomboka amin'ny (hot-dog) fahadimy, araka izany raha manomboka manafana kely ianao. “Raha iray ihany no hohaninao, dia mety hatavy ianao..!” hoy izy namazivazy.
Ny mpivarotra sy ny mpanampiny ao amin'ny “Dogão” de Tião. Sary nahazoana alalana
Raha ny tena izy, satria vaventy izy ireo, efa fahombiazana ny maka iray hafa. Mivarotra “lanche” i Tião hatramin'ny nialany tamin'ny asany taloha. Teraka tao Nordeste, tao amin'io tanàna io no tena nandaniany ny fiainany manontolo. Ankehitriny, monina ao Jaguaribe, ao an-tanàna manodidina ilany atsimo izy. “Tiako ity toerana ity, toerana nipoirako i Osasco”. Manambady izy, manampy azy amin'ny asany ny vadiny sy ny zanany roa vavy.
“Raha nanomboka teto aho, nianatra nanamboatra sandwich niaraka tamina lahy antitra iray nanome ahy ny fomba fandrahoany tamin'ny voalohany . Milofotra hanome sakafo tena tsara aho. Ny tsiambaratelo dia ny fanaovana zavatra amim-pitiavana ary ny fahadiovana no fepetra fanombohana” hoy izy nisisika.
Ao an-tanàna, tombanana ho efatra alina eo ny “lanches” hot-dog vita isan'andro. 324 ireo mpivarotra manana fahazoan-dalana izay mampiasa olona roa na telo tsirairay avy. Ny toerana tena malaza indrindra dia ny lalana Antônio Agu, arabe izay ivangongonan'ity karazam-barotra ity miaraka amin'ny vidiny eo amin'ny 3 hatramin'ny 5 reais. Avy eo, misy koa ao Maria Campos, izay nohatsaraina ny “lanches”, amin'ny vidiny manomboka amin'ny 6 hatramin'ny 8 reais, miaraka amin'ny hot-dogs atolotra anaty lovia. Mandray karatra fitrosana (karatry ny banky) ny ankamaroan'ny fivarotana.
Mihevitra i Tião fa zavatra mampiavaka mahaliana ao an-tanàna ity karazam-barotra ity, ary niverina tamin'ny resaka taona izy avy eo. “Tsy maintsy misaotra ny ben'ny tanàna nanome alalana tamin'ny fametrahana ireo fivarotana ireo satria ankoatra ny eto, tsy mahita itony sarety kely itony eny afovoan'ny arabe ianao” hoy izy, “manome tombony ho an'ny olona mitovy taona amiko sy tsy manana asa izany. Azo isaorana izy ireo nanao izany mba ahafahan'izy ireo mivelona”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/06/10/83646/
 navoaka voalohany tao amin'ny bilaogin'i Agência Mural: https://noticias.agenciamural.com.br/ti%C3%A3o-e-o-cachorro-quente-bomb%C3%A1stico-o-turbo-312b7ee0a9e2#.dx7s8rvlw